अमृत गिरी : ‘शैक्षिक परिवर्तनका लागि दिप्रुङ चुइचुम्माको प्रयास’ - Nepal's Online News
अमृत गिरी : ‘शैक्षिक परिवर्तनका लागि दिप्रुङ चुइचुम्माको प्रयास’
खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको परिवर्तनका लागि भनेर शिक्षकहरुको दरवन्दी मिलान र विद्यालय गाभ्ने काम केही दिन अघिमात्र गर्यो । गाउँपालिकाको बैठकले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई समान र समावेशी तरिकाले उकास्ने उद्देश्य रहेको भन्दै चार जना शिक्षक÷ शिक्षिकाको सरुवा तथा १५ शिक्षक दरबन्दी मिलान गरेको थियो ।
विद्यार्थी नभएको विद्यालयमा शिक्षक बढी हुने र विद्यार्थी बढी हुने विद्यालयमा शिक्षक अभाव हुने भएकाले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि शिक्षकको सरुवा तथा दरबन्दी मिलान गरिएको गाउँपालिकाले बताउँदै आएको छ ।
गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी तथा शिक्षक संख्या अध्ययन गरी दरबन्दी मिलान तथा सरुवा गरेको बताएको छ । तर, गाउँपालिकाले शिक्षकको सरुवा एबं दरबन्दी मिलान गरेको विषयमा शिक्षक तथा अभिभावकहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनीहरुले गाउँपालिका विरुद्ध आन्दोलन पनि गरे । गाउँपालिकाले शिक्षकको सरुवा तथा दरबन्दी मिलान गरेको विषयले यतिखेर चर्चा पाएको छ । किन गरिएको रहेछ त शिक्षकको सरुवा तथा दरबन्दी मिलान यसै विषयमा दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडासदस्य अमृत गिरीसंग प्रभाव न्यूज डटकमले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ :-
दिपुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा यतिखेर शिक्षक दरबन्दी मिलान र बिधालय गाभिएको विषयले चर्चा पाएको छ । खास के गरिएको हो ?
जव, हामी स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्धार भएर जनताको घरदैलोमा भोट माग्न गयौं त्यति वेला देखीनै गाउँपालिकाको समृद्धिका लागि शिक्षामा आमुल परिवर्तन गरि परम्परागत मान्यतालाई तोडी केही हदसम्म शिक्षालाई आधुनिकतामा बदल्छौं भन्ने प्रतिवद्धता जायर गरेका थियौ । संविधानले स्थानीय तहलाइ प्रद्धत्त गरेको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै गत २०७५ साल मंसिरमा हामीले गाउँपालिकाको महत्वपूर्ण शिक्षा नियमावली निर्माण गरि कार्यान्वयनमा ल्यायौं र शिक्षामा गुणस्तर वृद्धिका लागि यतिवेला हामीले हाम्रो गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली कार्यान्वयन गरेका हौं ।
यस दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा जम्मा वाल शिक्षा बाहेक ४९ वटा विद्यालय रहेका छन् । जसमा कक्षा ५ भन्दा माथिका विद्यालय १९ वटा छन् ति विद्यालयहरुमा शिक्षा नियमावली अनुशार दरवन्दी अभाव छ । यस गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावलीले ० कक्षादेखी १२ कक्षासम्म संचालन भएका विद्यालयमा सवै विषय मिलाएर जम्मा १४ वटा दरवन्दी रहेने भनेर किटान गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा १४ भन्दा बढी दरवन्दी भएको विद्यालयबाट दरवन्दी नभएको विद्यालयमा शिक्षक पठाएका हौं । यसमा अफट्यारो मान्नुपर्ने विषय केही पनि छैन् । अव कुरा रह्यो आन्दोलनको । जुन विद्यालयको धेरै भएको दरवन्दी हामीले नभएको ठाउँमा पठायौं त्यो दरवन्दी काटिएको विद्यालयका शिक्षकहरुले केही गुनासो गर्नुभएको मात्र हो ।
यसलाई आन्दोलनकोरुपमा हेर्न खासै मिल्दैन । गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावलीले शिक्षक सरुवा, दरवन्दी मिलान र विद्यालय गाभ्न मिल्ने अधिकार प्रद्द्त्त गरेको छ । नेपालको संविधान २०७४ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा जसरी राम्रो हुन्छ त्यसरी नीति बनाएर चलाउँने अधिकार दिएको छ सोही अधिकारलाई हाम्रो गाउँपालिकाले प्रयोग गरेको हो ।
गाउँपालिकाको शिक्षा समितिले शिक्षकहरुको समस्या ख्याल नगरी दरबन्दी मिलान गरेको र गाउँपालिका प्रमुखले आफु खुशी आफ्नो स्वार्थको लागि यस्तो कार्य गरेको भन्ने आरोप छ ?
हामी अहिले सही ठाउँमा आईपुग्यौं । यस विषयमा गाउँपालिकाको गाउँ शिक्षा समितिले करिव २ महिनासम्म सवै विद्यालयका प्रअ, अभिभावक, वुद्धिजीवि, जनप्रतिनिधिहरुसंग छलफल गरेर लामो समय अध्ययन गरेर मात्र दरवन्दी मिलान तथा विद्यालय गाभ्ने निर्णय गरेको हो । यसरी विध्यालय गाभ्ने तथा दरबन्दी मिलान गर्ने सायद स्थानीय तहमा हामी पहिलो भएकोले केही असहजताको अनुभूति केही साथिहरुले गर्नु भको छ तर यो सहज भैजान्छ ।
आरोप खास अभिभावकहरुको होईन समाजलाई विखण्डन गरेर आफ्नो हैकम जमाउन खोज्ने व्यक्तिहरुको हुन सक्छ तर उनीहरुलाई तिनै समुदायले बुझीसकेका छन् । यसमा गाउँपालिका अध्यक्षको के स्वार्थ हुनु ? गाउँपालिका भित्रका शिक्षकको माग अनुरुप घरपायक वनाईदिएको छ । नपढाए तवल रोक्का गर्ने गरेको छ । यसमा के स्वार्थ हुन्छ ? बरु पढाउँन अल्छी गर्ने शिक्षकहरुलाई दरवन्दी घटेपछि आफुले पनि पढाउँनुपर्ने पिरले पिरोलेको चाँही हुन सक्छ ।
उहाँलाई पढाउन अल्छी लागे अवकास लिने बाटो पनि खुला छ । गाउँपालिका अध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधिले त शिक्षामा सकारात्मक गुणात्मक शैक्षिक सुधार चाहेको हो यसमा कसैको स्वार्थ लुकेको छैन् ।
बिद्यार्थीको शैक्षिक स्तर उकास्नको लागि शिक्षक अन्त पठाएर मात्र हुन्छ कि तिनै शिक्षकलाई त्यहि बिधालय नमुना बनाउन जिम्मेवारी दिने हो?
शिक्षक सरुवाले शैक्षिक गुणस्तर माथी उक्सिन्छ भन्ने चाँही होइन् । तर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकिएन भने जुनसुकै समयमा गाउँपालिकाले नसहित दिन्छ भन्ने कुराले केही हदसम्म शिक्षक पाठ्यक्रममा केन्द्रित चाँही अवस्य पनि हुन्छन फेरी यसमा ढाँट्ने छल्ने ठाउँ नै छैन् ।
समस्या के रहेछ भने भौगोलिक कारणले विद्यालयहरु कक्तिपय टाढा– टाढा छन् विद्यालय आसपासका विद्यार्थी धेरै टाढा जति नै राम्रो नमूना विद्यालय भएपनि पढ्न जाँदैनन् । त्यस भेगका टाठा बाठाहरुले विद्यालय संचालन गरि आफ्नो ईज्यत बचाई राख्नु पर्ने समस्याले विद्यार्थी एकिकृत गर्न कठिन छ । ति विद्यार्थीहरुको पनि आफ्नो घर नजिक राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार छ । त्यसैले शिक्षक नै सरुवा वा दरवन्दी मिलान प्रकृया नै बढी प्रभावकारी हुने भएकोले यस गाउँपालिकाले यो प्रकृयालाई नीतिगतरुपमा अवलम्वन गरेको हो ।
यस गाउँपालिकामा हामीले एउटा विद्यालय गाभेका छौं । जहाँ १ जना मात्र शिक्षक दरवन्दी ३र४ जना विद्यार्थी मात्र रहेको र शिक्षक विरामी भएको दिन विद्यालय बन्द हुनुपर्ने जस्ता समस्या र भौगोलिक दुरी पनि अन्य विद्यालयमा जान नजिक रहेको कारण विद्यालय गाभिएको हो ।
अन्त्यमा शिक्षक दरवन्दी मिलान र विद्यालय गाभ्दा केही परिर्वतन आउला ?
गाउँपालिकामा शिक्षक दरवन्दी मिलान र विद्यालय गाभिएको विषयले शैक्षिक क्षेत्रमा अवस्य पनि परिवर्तन आउँछ । गाउँपालिका बासी नागरिकलाई थप जानकार बनाउँनका लागि समय उपलव्ध गराएर मेरा विचार राख्ने अवशर दिनुभएकोमा प्रभाव न्यूज डटकम परिवारलाई विशेष आभार दिन चाहान्छु ।
गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउँने अभियानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा आमुल परिवर्तन गरि पालिकावासीको जीवनयापनमा सहजता ल्याउँनु हामि सवै आम नागरिकको कर्तव्य हो । गाउँपालिकाको शिक्षाको विषयमा प्रष्ट पार्ने मौका दिनुभयो ।
गाउँपालिकाको शैक्षिक क्षेत्रको समृद्धिको लागि जस्तोसुकै अवस्थामा सकारात्मक पक्षमा सुधारका लागि सवैको ध्यान जाओस, धन्यवाद !
मेरो घटुवा होइन बढुवा भएको हो : दंगाल
गर्भपतनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कानूनको विरोधमा अमेरिकाभर प्रदर्शन
बम बिस्फोटमा परी ज्यान गुमाउनेको संख्या १ सय ३८ पुग्यो
‘ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउँने कार्य निरन्तर छ’ : अध्यक्ष निरौला
सरकारकै कारण निजामती कर्मचारी मारमा : अनिल आचार्य